I-Cozy Oak Shores Lake Cottage enokubukwa Okumangazayo!
I-Lake Cottage yethu inesitezi esikhulu esihle esigcwele igumbi lomndeni lokubuka echibini elinesitofu sokhuni, amagumbi okulala ama-3, obhavu abangu-2.5, kanye negumbi eliphansi eligcwele elinombhede ophindwe kabili, isikrini esikhulu se-TV, Indawo yomlilo ethokomele yokuhlangana phambi kwayo !! Isitezi esikhulu esine-grill yegesi kanye nomgodi womlilo. Imizuzu embalwa nje emigwaqweni egandayiwe esuka edolobheni kanye nezindawo zokudlela zase-Aggieville, ama-shoppes, kanye nemisebenzi ye-KSU kanye ne-Fort Riley.
Leli chibi elihle linakho konke okudingayo ezingeni elikhulu okubandakanya igumbi lokuhlangana elingaphambili elineziko, ikhishi labapheki eligcwele ngokugcwele, igumbi lokudlela, umhume onomtapo wezincwadi, amarekhodi, nesibonakude sokubuka izinkanyezi, ilondolo, amagumbi okulala ama-3 (i-master ennsuite enokubukwa kwechibi). kanye ne-Big Screen TV), amabhavu angu-2, negumbi lechibi elihle elinesitofu esishisayo ukubukwa kwechibi okukhethekile kanye ne-TV yesikrini esikhulu; kanye nebhonasi yezinga eliphansi eligcwele elinendawo eningi yokuhlangana noma i-Yoga, i-Big Screen TV, Indawo Yomlilo Kagesi, Ama-Recliners, usofa, nesihlalo sothando, Umbhede Ophindwe Kabili, Ithebula Legeyimu, I-Half Bath, Iwashi/Igumbi Lodaka eligcwele uphumele egcekeni elihle elinezitezi ezimbili negceke elingemuva !!! Izinsiza zangaphandle zifaka umpheme ongaphambili omboziwe onezihlalo ezijingiwe kanye nezihlalo ezithokomele zokufunda noma ukubuka imvula, ama-hammocks amabili, indawo yokubukwa kwechibi egcwele ngemuva enama-grill nomgodi womlilo, inethi ye-volleyball, igoli le-basketball, ne-croquet.
I-Cottage itholakala endaweni yangasese ye-de-sac ene-driveway kanye nezindawo zokupaka ezingaphandle komgwaqo. Iyindawo ethule, enobungane, enokubukwa kwechibi elihle nezihlahla ezinkulu ezinomthunzi
I-imeyili, umbhalo, izingcingo, abanikazi abasendaweni